Shabakadda Amiirnuur – Page 64
Sheekh Cabdil-caziiz Al-fowzaan oo lagu xiray dhulka Xarameynka.
Sida uu shaaciyay xisaab barta Twitterka ka diiwaan gashan, soona tabiya wararka la xiriira raafka maamulka Aala-Sucuud uu ku hayo culimada iyo cid weliba oo uu kaga cabsi qabo iney ka hor timaado tallaabooyinka uu wado, waxaa la xiray sheekh Cabdil-caziiz Al-fowzaan. Ciidamo katirsan Amaanka maamulka Aala-Sucuud ayaa xiray Cabdil-caziiz […]
Dagaallo Xalay Ka Dhacay Muqdisho.
Weerraradan oo qaraxyo ahaa ayaa lagu beegsaday fariisimayaal kala duwan oo ay lahaayeen Ciidamada DF iyadoona ay sii kordhayaan weerarrada ka dhacaya gudaha Muqdisho. Weerarka hore ayaa ka dhacay xarunta degmada Howlwadaag halkaas oo lagu beegsaday qarax, waxaana la sheegay in goobta ay ku sugnaayeen Ciidamo xilliga qaraxau dhacayay wallow […]
Dedeg: Al-Shabaab oo Weerar Madaafiic Ah Ku Qaaday Dayuurad Kusoo Degtay Baraawe.
Tiro Madaafiic ah ayaa lagu beegsaday diyaarad Milatari oo nooca Helicopter-ka ah xilli ay ku soo dageysay saldhig Milatari oo ku yaalla duleedka degmada Baraawe. Diyaaradda oo sahay u sidday Ciidamada shisheeye ee ku sugana gudaha Baraawe ayaa lagu beegsaday madaafiicda xilli ay ku soo dageysay gudaha saldhig ku yaalla […]
Baadari katirsan Kaniisadda Orthodoxiska oo lagu dilay wadanka Masar.
Waxaa aroornimadii hore ee maanta oo isniin ah gudaha kaniisadiisa isagoo mayd ah lagu arkay mid kamid ah baaderiyaasha Nasaarada wadanka Masar. Bayaan kasoo baxay Kaniisadda Orthodoxiska dalka Masar ayaa lagu sheegay in gudaha qolka uu ka deganyahay kaniisadiisa isagoo meyd ah lagu arkay baaderiga Ivaniyos oo kamid ah baaderiyaasha […]
Ciidamada Al-Shabaab Oo La Wareegay Deegaan Istiraatiiji ah Oo Gedo katirsan.
Wararka ka imaanaya wilaayada islaamiga ee Gedo ayaa tibaaxaya in ciidamo aad u hubeysan oo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay la wareegeen deegaan muhiim ah oo dhaca gobolkaas. Deegaan lagu magaacaabo Saateelow oo u dhexeeya degmooyinka Doolow iyo Luuq ee gobolka Gedo ayay ciidamada Mujaahidiinta la wareegeen gelinkii dambe ee […]
Madaxda iyo saraakiisha ciidamada Kenya ee ka howlgala gobolka NFD iyo saaxilka ay Muslimiintu leeyihiin ayaa wajahaya qal-qal dhanka amniga ah oo uga imaanaya dhanka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab. Gudoomiyaha gobolka Mandheera Cali Roba oo waraysi siiyay wargeyska The Standard ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa shaaca ka qaaday inuu wajahayo […]
Sh/Jaamac Aadam oo Maanta Lagu Aasay Sh/hoose. “رحمه الله‬‎” (Sawirro+Warbixin)
Inkasta oo uu qofka walbaahi dhimanayo maalinta ay tiisa timaado, haddana waxaa jirta in geeridu kala xanuun badan tahay. Qof baa markii uu dhinto saameynta geeridiisu noqotaa mid ku kooban eheladiisa, oo waa qofka iska caadiga ah. qofna waxay geeridiisa taabataa bulshada oo dhan, waana qofka Culimada ah ee dadka […]
Sawirro+Dhageysi: Diiradda Jimcaha oo Lagu Soo Qaatay Shir Muhim Ah oo Ka Dhacay Sh/hoose.
Diiradda Jimcaha waa barnaamij mug weyn leh, oo usbuuciiba maanta oo kale ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan. Barnaamijkan oo had iyo goor lagu soo qaado qodob muhim ah, ayaa waxaa maanta lagu soo bandhigay shir muhim ah oo ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee Sh/hoose, kaasoo u dhaxeeyay […]
Al Shabaab Oo Sheegatay Mas’uuliyadda Askar iyo Saraakiil Lagu Dilay Magaalada Muqdisho.
Dagaalyahano hubeysan oo ka tirsan Xarakada Al-Shabaab ayaa maanta weeraro qorsheysan oo iqtiyaalaat ka fuliyey magaalada Muqdisho kuwaas oo lagu beegsaday Saraakiil iyo maleeshiyaat ka tirsan DFS. Mid ka mid ah weeraradan ayaa ka dhacay agagaarka Isgoyska Bakaaraha ee magaalada Muqdisho, waxaana lagu dilay Sarkaal ka tirsan ciidanka Police-ka DFS […]
Qarax khasaare culus geystay oo Ciidamada DF lagula eegtay Sh/hoose.
Qarax khasaare culus geystay ayaa haleelay gaari Tikniko ah oo ay la socdeen Ciidamo ka tirsan maamulka Farmaajo xilli ay marayeen wadada isku xirta degmooyinka Afgooye iyo Wanlaweyn ee Sh/hoose. Qaraxan oo dhacay gelinkii danbe ee maanta ayaa sababay in si ba’an u burburo gaariga Tiknikada isla markaana uu laba […]
« Previous 1 … 62 63 64 65 66 … 130 Next »